Christian Slater – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Zoolander (2001) Unicode ဖကျရှငျမျောဒယျတဈယောကျ brainwashed အလုပျခံရပွီး မလေးရှားဝနျကွီးခြုပျကို လုပျကွံဖို့ဖွဈလာတဲ့အကွောငျးကို ဟာသနှောပွီးရိုကျကူးထားတာပါ။ ဟာသကားနှဈသကျသူတှအေကွိုကျတှမေဲ့ဇာတျကားဖွဈပွီး imdb 6.5 အထိရထားတာလဲဖွဈပါတယျ။ Zawgyi ဖက်ရှင်မော်ဒယ်တစ်ယောက် brainwashed အလုပ်ခံရပြီး မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကို လုပ်ကြံဖို့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကို ဟာသနှောပြီးရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဟာသကားနှစ်သက်သူတွေအကြိုက်တွေ့မဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး imdb 6.5 အထိရထားတာလဲဖြစ်ပါတယ်။
IMDB: 6.5/10 235,135 votes
Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994) Tom Cruise တို့ Brad Pitt တို့ ငယ်ရွယ်တုန်းပုံစံတွေကို မြင်ရမဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းပါ။ ဒီကြားထဲ Spider Man မင်းသမီး Kirsten Dunst ဆို ကလေးပဲရှိပါသေးတယ်။ Vampire တစ်ယောက်ကို သူ့ဘ၀ အကြောင်း Interview တဲ့ ဘယ်လိုတွေကြားသိရမလဲ ဘာကြောင့် Vampire တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာလဲ ? စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းပါ။ imdb 7.6 အထိရှိပြီး ရှားပါး ဇာတ်ကားလေးမို့ မကြည့်ရသေးသူတွေကော ပြန်ကြည့်ချင်သူတွေအတွက်ပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
IMDB: 7.6/10 275,693 votes
The Adderall Diaries (2015) Writer and Adderall enthusiast Stephen Elliott reachesalow point when his estranged father resurfaces, claiming that Stephen has fabricated much of the dark childhood that that fuels his writing. Adrift in the precarious gray area of memory, Stephen is led by three sources of inspiration:anew romance, the best friend who shares his history, andamurder trial ...
IMDB: 5.2/10 3,568 votes